1 PITA १:१३
Ya mere ụmụnna m nꞌime Onyenwe anyị, unu ndị Chineke doro iche mee unu ndị nke ya na ndị ozi ya. Chineke emeela unu ndị ezinụlọ ya. Ọ bụkwa ihe kwesịrị ekwesị ka unu cheta Jisọs Kraịst onye e mere onyeisi ozi nke Chineke, na onyeisi nchụaja nke okwukwe anyị.
 Ugbu a, igwe ndị okwukwe a nile nọ na-ele anyị anya. Ha gbara anyị gburugburu. Ka anyị wezuga ihe nile ga-egbochi anyị. Ka anyị tụpụ mmehie nile tụhịkọtara onwe ya nꞌahụ anyị. Ka anyị jiri ike anyị nile, na-eleghị anya nꞌazụ gbaa ọsọ ahụ dị anyị nꞌihu. Ka anyị lekwasịkwa Jisọs anya. Ọ bụ onyendu na onye mmezu okwukwe anyị. Ihe ihere nke obe ahụ amasịghị ya. Ma ọ tachiri obi nagide ihe ihere ahụ. O lere anya ọṅụ nke ga-eso ahụhụ nile ọ hụrụ nꞌelu obe. Site na nke a, ọ nọ ugbu a nꞌaka nri ocheeze Chineke.
 Nꞌihi na ngwa agha anyị ji ebu agha, abụghị ngwa agha nke ụwa, kama ha bụ ngwa agha dị ike nke Chineke na-enye; ngwa agha ahụ anyị ji akwada nzube nile nke ekwensu wusiri ike, laa ya nꞌiyi. Anyị na-eji ngwa agha ndị a emegide okwu ụgha nile na okwu nganga nile, nke ndị mmadụ na-eji ekpuchi eziokwu nile gbasara Chineke. Anyị na-ejikwa ngwa agha ndị a eme ka obi nile bụrụ ihe e meriri emeri irubere Kraịst isi.
 Anaghị m ekwu nꞌebe a na etozuola m, mara ihe nile. Amụtachabeghị m ihe nile m kwesịrị ịmụta. Kama ihe m na-eme bụ ịgbalịsị ike ịrụ ọrụ m na-aga nꞌihu, tutuu ruo ụbọchị ahụ m ga-abụ ihe ahụ nile Kraịst onye zọpụtara m, chọrọ ka m bụrụ. Ụmụnna m, nꞌezie, abụbeghị m ihe ahụ m kwesịrị ịbụ. Ma ihe m ji ike m nile na-eme bụ ichefu ihe nile gara aga, na ilekwasị anya nꞌihe ahụ m na-agbaso dị m nꞌihu. Ana m agbasi ọsọ ike ịga nꞌihu, iru na njedebe ebe ahụ a ga-agbaru ọsọ, ka m nwee ike inweta ihe ahụ a na-agbata nꞌọsọ, nke Chineke kwadebere inye ndị ya nꞌeluigwe, nꞌihi ọrụ zuru oke ahụ Onyenwe anyị Jisọs Kraịst rụrụ nꞌihi anyị.